Nuummite, kubva kuGreenland. amphibole mineral gedrite uye anthophyllite. Vhidhiyo
Nuummite, kubva kuGreenland
Nuummite is a rare metamorphic rock that consists of the amphibole minerals gedrite and anthophyllite. Inodanwa zita reNuuk muGreenland, kwaakawanikwa.
Nuummite kazhinji inopenya inopenya uye yakaoma. Iyo inoumbwa neamphiboles maviri, gedrite uye anthophyllite, iyo inoumba exsolution lamellae iyo inopa dombo racho rinowanikwa irilycence. Zvimwe zviya zvinowanikwa mumatombo ndeye pyrite, pyrrhotite uye chalcopyrite, iyo inogadzira shimmering yellow bands mumapurogiramu akaputika.
MuGreenland dombo rakaumbwa nemhando mbiri dzakatevedzana metamorphic overprints ye dombo rekutanga risina hanya. Kuwedzera kwakaitika muArache kwakapoteredza 2800 mamiriyoni apfuura uye metamorphic overprint yakanga yakanyorwa pa 2700 uye 2500 mamiriyoni akapfuura.
Dombo rakatanga kuwanikwa mu1810 muGreenland ne mineralogist KL Giesecke. Yakatsanangurwa nesayenzi neB Bjggild pakati pe1905 ne1924. Ichokwadi Nuummite inongowanikwa muGreenland. Pamusana pemaitiro ayo aripo, iyi dombo risinganzwisisi inotsvakwa nevakagadzirwa nematombo, vatengesi nevaya vanofarira esoteric. Inowanzotengeswa nekamble kupedza.
Chikamu Mineral zvakasiyana
Fomu yeforomu: 780.82 gm
Mucherechedza: Mutsvuku, mvere
Cleavage: Yakakwana pa 210
Mohs kuwedzera kuoma: 5.5 - 6.0
Refractive index: 1.598 - 1.697 Biaxial
Nuummite inoshandisa mvura ine simba, simba renyness, simba runyararo, uye kuchenesa. Iyo inowedzera zvigone zvisingagoneki. Iyo inobvuma, isina chimiro, asi ine simba. Izvo mvura inounza simba rekuvandudzwa nekudzokorora zvakare. Iko simba reruundi rwehupenyu. Shandisa mavara machena kuti uwedzere chero nzvimbo yaunoshandisa pakuzorodza, kuratidzira kuratidza, kana munyengetero. Simba remvura rinowanzobatanidzwa neNorth nzvimbo yeimba kana imba. Iyo inobatanidzwa neChechi uye Life Path nzvimbo, simba rayo rinoputika rinotsigira kuenzana kwesimba sezvo hupenyu hwako hunobuda uye hunoyerera.